“ (အလကား) ဦးဇော်ဇော် ” ( အရမ်းကို လေးစား မိပါတယ် ) – Shwe Ba
ကိုယ်ဖာသာ အနံပျောက်တာကို ခေါ်ပီး စစ်ဆေး ပေး တယ် အလကား တဲ့ Positive ရှိတယ်လည်းသိရော ထမင်းကျွေးပီး p center. ပို့ပေးတယ် အလကား တဲ့ Center ရောက်တော့ ကုတင်တစ်လုံး စီပေါ်မှာ စောင်အသစ် ခေါင်းအုံးအသစ် ခြင်ထောင်အသစ် အိပ်ယာခင်းအသစ် ခေါင်းအုံးစွပ်ကလည်းအသစ် Aircon ကလည်း အသစ်တပ်ထားသေးတယ် အလကား တဲ့
အိမ်သာ ရေချိုးခန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလည်း အဆင်သင့် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါး နဲ့ ကျန်းမာရေးအထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေကလည်း အဆင်သင့် အလကား တဲ့ နံနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ အတွက်ကလည်း တစ်နေ့ တစ်မျိုးမရိုးရအောင်စီစဉ်ပီး ပို့ပေးနေတာ အလကားတဲ့ဦးဇော်ဇော် တို့မိသားစုက ပြည်သူတွေကို အလကားကုပေးနေပေမဲ့ ပြည်သူတွေကလည်း အလကားမနေပါဘူးဗျာ
အချိန်တိုင်းမှာ ဦးဇော်ဇော်တို့မိသားစု ကျန်းမာပါ စေကြောင်း မတူညီသော မေတ္တာပို့သံ ဆုတောင်းသံတွေက စကြ်ာဝဠာ တစ်ခုလုံးမှာဆူညံနေလောက်ပါပီ ဘဝပေါင်းအဆက်ဆက်အတွက် ဘုံဗိမ္မာန်တွေလည်းပေါက်နေလောက်ပါပီ အရာရာတိုင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ဦးေ ဇ်ာဇော် လူ့ဘဝ ခဏတာလေးအတွင်းမှာ ဦးဇော်ဇော်လို စာနာတက်တဲ့ လူရှိတဲ့
မြေ ပေါ်မှာ တစ်ခေတ်တည်း အတူတူ လူဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်………
crd : မူရင်း Posts ပိုင် ရှင်
ကိုယျဖာသာ အနံပြောကျတာကို ချေါပီး စဈဆေး ပေး တယျ အလကား တဲ့ Positive ရှိတယျလညျးသိရော ထမငျးကြှေးပီး p center. ပို့ပေးတယျ အလကား တဲ့ Center ရောကျတော့ ကုတငျတဈလုံး စီပျေါမှာ စောငျအသဈ ခေါငျးအုံးအသဈ ခွငျထောငျအသဈ အိပျယာခငျးအသဈ ခေါငျးအုံးစှပျကလညျးအသဈ Aircon ကလညျး အသဈတပျထားသေးတယျ အလကား တဲ့
အိမျသာ ရခြေိုးခနျး သပျသပျရပျရပျကလညျး အဆငျသငျ့ လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါး နဲ့ ကနျြးမာရေးအထောကျကူပွုပစ်စညျးတှကေလညျး အဆငျသငျ့ အလကား တဲ့ နံနကျစာ နလေ့ညျစာ ညစာ အတှကျကလညျး တဈနေ့ တဈမြိုးမရိုးရအောငျစီစဉျပီး ပို့ပေးနတော အလကားတဲ့ဦးဇျောဇျော တို့မိသားစုက ပွညျသူတှကေို အလကားကုပေးနပေမေဲ့ ပွညျသူတှကေလညျး အလကားမနပေါဘူးဗြာ
အခြိနျတိုငျးမှာ ဦးဇျောဇျောတို့မိသားစု ကနျြးမာပါ စကွေောငျး မတူညီသော မတ်ေတာပို့သံ ဆုတောငျးသံတှကေ စကျွာဝဠာ တဈခုလုံးမှာဆူညံနလေောကျပါပီ ဘဝပေါငျးအဆကျဆကျအတှကျ ဘုံဗိမ်မာနျတှလေညျးပေါကျနလေောကျပါပီ အရာရာတိုငျးအတှကျ ကြေးဇူးပါ ဦးေ ဇျာဇျော လူ့ဘဝ ခဏတာလေးအတှငျးမှာ ဦးဇျောဇျောလို စာနာတကျတဲ့ လူရှိတဲ့
မွေ ပျေါမှာ တဈခတျေတညျး အတူတူ လူဖွဈခှငျ့ရှိတဲ့အတှကျ ဂုဏျယူမိပါတယျ………
crd : မူရငျး Posts ပိုငျ ရှငျ
ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း(၇၅၀)ကျော် ဖောက် ထွင်း ခိုးယူ သွားပြီးမှ. . သိန်း(၅၀၀) ကျော် ပြန်လာ ထားပေးသွား တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး